Anche Cabral, Ilay Vehivavy Timorey Voalohany Mandray Anjara Amin’ny Lalao Cross-Country Olaimpika Ao Rio de Janeiro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Aogositra 2016 6:06 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, Português
Sary nalefa tao amin'ny pejy Facebook ofisialin'i Anche Cabral .Nahazoana alàlana.
Hamolaka ny lalana 5400 metatra amin'ny hazakazaka am-bisikileta cross-country ilay mpitaingina bisikileta Timaorey amin'ny 20 sy 21 Aogositra ho avy izao. Araka ny fandaminana ao amin'ny Lalao Olaimpika ao Rio [teny anglisy], 80 no handray anjara amin'ny fifaninanana (50 lehilahy ary 30 vehivavy).
Vaovao lehibe niteraka fahatalanjonana ho an'ilay mpanao hazakazaka am-bisikileta sy ny namany, izay niteraka firaisan-kina lehibe tao an-drenivohitr'i Timor Atsinanana, Dili. Nisy fanangonan-tsonia nivezivezy tao amin'ny tambajotra sosialy mba hanangonana vola ahafahan'ilay atleta handray anjara amin'ny Lalao Olaimpika.
Iza moa Anche Cabral?
Teraka tao amin'ny distrikan'i Souro ao Lospalos, any atsinanan'i Timor i Anche. Iraika ambin'ny folo izy no mpiray tampò – fito lahy sy efa-bavy – Niaiky izy fa ny fanohanan'ny fiaraha-monina nasionaly sy iraisam-pirenena no nanampy ny fianakaviany sy ny fandraisany anjara amin'ity fifaninanana malaza iraisampirenena ity ary nahafahany nangataka fialan-tsasatra tsy misy tambiny sady nandao ny fianakaviany tsy nisy olana.
Hatramin'izao, nahavita nanangona 10 000 dolara ilay atleta ; tsy tamin-kafaliana fotsiny no nandraisany ilay vaovao, fa tamin'ny fahagagana ihany koa:
Tsy nampoiziko ilay izy ary tena faly be aho.Voninahitra lehibe ho ahy ny hisolo tena ny fireneko. Lahatsary momba an'i Anche Cabral
Nahatsiaro ny nitaingenany bisikileta voalohany i Anche Cabral tamin'ny resadresaka nifanaovany tamin'ny Global Voices:
Tiako foana hatramin'ny mbola kely ny mitaingina bisikileta. Tsy nisy nanana bisikileta ny olona, kanefa naniry ny mba hanana iray aho. Mbola ato an-tsaiko foana izany faniriana izany ankehitriny. Niaraka tamin'ireo namako no nanombohako izany izay nampindrana ahy ny bisikiletany. Nandray anjara tamin'ny hazakazaka vitsivitsy aho tamin'ireo bisikileta ireo.
Nilaza i Anche fa nanomboka nifantoka tamin'ny hazakazaka am-bisikileta rehefa nandray anjara tamin'ny Fitetezana an'i Timor tamin'ny taona 2009, tamin'ny làlana mandalo an'i Dili, Baucau, Loihunu, Betano, Maubissi ary nifarana indray tao Dili. Tsy maintsy nandalo fifanitsanana ilay mpanao hazakazaka am-bisikileta vao afaka nandray anjara tamin'ity dingana ity. Ary tao anatin'ny mpifaninana 25 voafantina izy :
57 izahay no nandray anjara . 4 ny vehivavy ary izaho irery no voafidy voalohany handray anjara tamin'ny Tour de Timor taminay rehetra.
Ny fisaorana tamin'ny fanohanana lehibe no namaranan'ilay atleta ny resadresaka tamin'ny Global Voices ; raha tsy izany dia tsy nanana ity fahafahana manokana izy hisoloany tena an'i Timor Atsinanana amin'ny sehatra ambony amin'ny hazakazaka am-bisikileta iraisampirenena amin'ny taranja VTT. Manantena izy fa handrisika ny vehivavy hafa ny fandraisany anjara amin'ny Lalao Olaimpika :
Aminy fandraisako anjara, manantena aho fa handrisika ny vehivavy mba hanao toy izany koa, tsy maintsy mampiseho amin'izao tontolo izao izahay fa afaka ny ho mahomby ny vehivavy Timorey .